သက်ဆိုင်ရာကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားချင်လို့ပါ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Know-How, DIY » သက်ဆိုင်ရာကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားချင်လို့ပါ..
သက်ဆိုင်ရာကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားချင်လို့ပါ..
Posted by ဆူး on Jul 3, 2011 in Know-How, DIY, Think Tank | 26 comments
ဆူး စိတ်ကူး အားလုံး ပဲ အဖြေ ရှာ ပေးကြပါ။
Violence, Non-Violence and Terrorism – ခင်မမမျိုး
– kai |38- Hits|
Posted by kai on Jul 2, 2011 in Contributor, Columnist, Opinions & Discussion, Think Tank
– kai |61- Hits|
Posted by kai on Jul 2, 2011 in Myanma News, Opinions & Discussion, Press Announcements |
Burmese Community Center Fundraiser Event – July 9, 2011
– kai |48- Hits|
Posted by kai on Jul 2, 2011 in Events/Fundraise |
ဂျူလိုင် ၂ရက်နေ့ ဒိတ်နဲ့ ပိုစ် ၃ခု တွေ့နေပါတယ်။
12. မင်န်ဘာတဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရ
အဲဒီတော့ သဂျီးကိုယ်တိုင် ထုတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်း သဂျီး ကိုယ်တိုင် ခြေနဲ့ ဖျက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေ ရဲ့ အထက်က သဂျီး ဖြစ်နေပါတယ် ဗျို့..
ဒီမိုကရေစီ သဂျီး သဂျီး ဒီမိုကရေစီ.. လုပ်ကြပါအုန်း ဗျို့..
ရွာသားများ.. တယောက်အားနဲ့ မစွမ်းသာ အများအားနဲ့ ပေါင်းစည်းမှ ဖြစ်ပါတော့မယ်။
စည်းကမ်းသည် လူ၏ တန်ဖိုး…
ရွာသားများ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ..
၀ိုင်းပြီး တိုင်ပေး ဆွေးနွေးပေးကြပါအုန်း။
အဲဒါက သူကြီးလေ … သူက အယ်ဒီတာချုပ် … သာမန်မန်ဘာမဟုတ်ဘူး ….
စည်းကမ်းဆိုတာ မန်ဘာတွေအတွက်ပဲ ထုတ်ထားတာ …. ရွာထဲမှာ စည်းကမ်းမလိုက်နာဘဲ နေပေမယ့် သူကြီးက မသိချင်ယောင် (မမြင်ချင်ယောင်) ဆောင်နေတဲ့ မန်ဘာတွေလဲ တစ်ခါတစ်လေ တွေ့ရတယ် … သူတို့က အထူးမန်ဘာတွေလဲ ဖြစ်နိုင်တာဆိုတော့ ….
ကဲ သူကြီးရေ တိုင်ချက်တော့ ဖွင့်ကုန်ပြီ။
မှားတင်ထားတာ မှန်ရင် တပုဒ်ကိုရက်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
သဂျီးမင်းဂို အိုက်ဒီလို မပြောရဘူးကွဲ့
( ဒီလို ပို့စ်တွေတင်ပေးမှဘဲရပေမပေါ့ကွယ် ဒါမှ ကိုယ်တင်ထားတဲ့
မကောင်းတဲ့ပို့စ်တွေကို ပြန်ကာမိမှာပေါ့နော )
အင်းးးးးးးးးးးဒီရွာထဲမှာတော့ ဒီသူငယ် အသိတတ်ဆုံးပဲ။ (သဂျီးမင်းသည် စိတ်ထဲက စဉ်းစားရင်း ပြုံးနေပါသည်။)
******** ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ဒိသာပါမောက္ခကြီးက ဤကဲ့သို့ စဉ်းစားမိသော တပည့်အား သားမက် အဖြစ် ရွေးချယ် တတ်ပါသည်။
ဤကား ပုံပြင် အလိုတည်း။
အော် ..အန်တီဆူးရယ် ” ငါပြောသလိုလုပ်..ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့” ဟိုတလော က ဘယ်သူလဲမသိဘူးပို့စ်တင်တာ ဖတ်ဘူးတယ်….
ဟုတ်သားပဲ ဆူးပြောမှကြည့်မိတယ် ဗျို့သဂျီ့း
ခေါင်ကစပြီး မိုးယိုတာတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ့်
ဆေးရိုးထွက်လှန်း တဲ့ လူတွေ နဲ့ တူနေပြီ။
do as i say not as i do ကို ကျုပ်ရေးဘူးတယ် ထင်တာဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ် လေးဖတ် .. မှားသွားမလားစိုးရိမ်စိတ်ကြောင့် ထည့်မရေးဖြစ်တာပါ.. ကျွန်တော် ဖတ်မိတဲ့အကြောင်း ပြောရင်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်ခင်ဗျား…………
ဥပဒေအရတော့ဖြင့် အကျုံးဝင်သလား မသိ…
“မင်န်ဘာတဦးသည် တရက်လျှင်ပို့စ် ၂ခုထက်ပိုမတင်ရ” ဆိုသည်တွင်..
သဂျီးသည် မည်ကဲ့သို့သော နေရာတွင် ရှိလေသနည်း မသိရ..
အကယ်၍ ရွာ၏သဂျီးသည် မင်န်ဘာ ဟု ဆိုခဲ့လျှင်…
နန်းတော်တိုင်ကို ထုံးသုတ်မိသော မင်းကဲ့သို့…
ကိုယ့်အပြစ် ကိုယ်တိုင် စီရင်ရပေမည်…
သူကြီးသည် မန်ဘာမဟုတ်၊မန်ဘာမဟုတ်သောကြောင့် သူကြီးဖြစ်၏။ထို့ကြောင့် သူကြီးထုတ်သော ဥပဒေသည် မန်ဘာများနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။သူကြီးပါလို့ ဆိုနေမှ….
သူကြီးဘက်မှရှေ့နေလိုက်ပေးသည် …အကျိုးတော်ဆောင်ခ ပွိုင့်(၅၀၀)ကျပါသည်။ထို အကျိုးတော်ဆောင်ခအား အမူတင်သွင်းသူ ဒေါ်ဆူးမအား ပေးဆောင်စေ။
ဒီရွာ ရဲ ကွမ်းတောင်ကိုင်က စပြီး တိုင်ကြားတော့ မနေနိုင်တော့ ဘူး သဂျီး
သဂျီး ဘက်မပါနိုင်တာခွင့်လွှတ် ပါ (သူကရွာရဲ့ ကွမ်းတောင်ကိုင်ကိုဂျ) ဥပဒေ အထက် (စည်ကမ်း) တွင် မည်သူမှ မရှိစေရတဲ့ (ချိတ်ထမိန်နဲ့ ဦးလေကြီးပြောတာ) ခက်တာ ကအဲဒါ ကို သဂျီး က ဖောက်တယ်ဆိုတော့ ဥပဒေအရ သဂျီးကို ရာထူးချတယ် members တွေကို ပွိင့်တွေပေးခွင့် မရှိ အဲဒီလိုဆိုတော့လဲမဟုတ်သေးဘူး ရွာသားတွေ တိုင်ပတ်တော့မပေါ့ ဒါကြောင့် အယူခံဝင်ပါ သဂျီး
လစ်ဗျားကောင်းကင်ပေါ်.. လေယဉ်မပျံသန်းရအမိန့် ထုတ်ထားတာကို .. ချိုးဖေါက်ပျံသန်းတဲ့..လစ်ဗျားလေယဉ်ကို… အဲဒီမှာပျံနေတဲ့ပြင်သစ်လေယဉ်က ပစ်ချလိုက်ပါတယ်..။
A French fighter jet enforcing the no-fly zone shot downaLibyan plane Thursday near the besieged rebel-held city of Misrata,aU.S. official said.
The French fighter destroyedaLibyan G-2/Galeb,amilitary trainer aircraft, apparently as it was trying to land, the official said. Other details remained sketchy about the mid-air confrontation.
Coalition warplanes also blasted military targets on the outskirts of Misrata, but couldn’t keep the tanks of Col. Moammar Khadafy from entering the city.
သူကြီးရေ စည်းကမ်းက စည်းကမ်းနော်။ သူကြီးကစ လိုက်မနာရင် ကျန်သူက ဘယ်လိုလိုက်နာမှာတုံး။
သဂျီးမင်းဖြစ်လို့ ဥပဒေချိုးဖောက်တာ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ သူက အမေလိကန်စံတော်ချိန်နဲ့ ပို့စ်အချို့ကို တင်ပြီး အခြားပို့စ်ကိုတော့ ဆိုက်ကပြတဲ့ အခြားစံတော်ချိန်တမျိုးနဲ့ တင်လိုက်တဲ့အတွက် နှစ်ရက်ခွဲတင်တယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါသည်။
Time difference. မှန်၏ ။
ဒီဥပဒေက စထုတ်ထားကတည်းက သဂျီးက မန်ဘာတွေအတွက်သာ ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့
သူဂျီး အတွက်ထုတ်တားတာ မဟုတ်ပါတဲ့
သဂျီးတင်တာကတော့ ခြွင်းချက်ဆိုပေမဲ့ … တခြားလူတွေ သဂျီးကို အားကျကုန်လျှင် မခက်ပေဘူးလား ။ အဲ့ဒီအချိန်ဆို …. ဖလန်းဖလန်းထပြီး ရွာတော့ပြန်ဆူဦးမယ်ထင်တယ် … ။
ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိရ ၊
ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အရေးပေါ်အစည်းအဝေး လုပ်လိုက်ပါလား
မန်ဘာ = ရွာသူရွာသား
သူကြီး != ရွာသူရွာသား
ထို့ကြောင့် သူကြီး != မန်ဘာ
သူကြီး = အစ်ဒမင်
အစ်ဒမင် != မန်ဘာ
ထို့ကြောင့် rules for members is not for admin
ဒီမို သဂျီး ထင်နေတာ အာဏာရှင် သဂျီး ဖြစ်နေတယ်
လစ်ဗျားရဲ့ တိမ်မြုပ် ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ သား အငယ် တယောက်
အခုမှ သတိထားမိတယ် ကဒါခိုင် ဆိုပါလား.. ကြောက်ချာကြီး ဗျာ…
ရွာသားတွေ ကို မငြှင်းပန်း နဲ့နော်
ဟုတ်ပါ့.. ဒီမိုကရေစီရွာ ထင်နေရင် မှားမယ်။
လစ်ဗှား ရဲ့ ခေါင်းဆောင် ကဒါဖီ ရဲ့ သား အငယ် ကဒါခိုင် ဆိုပါလား.. ဟိဟိ..
သူကြီးတော့ MG က စသုံးလုံးနဲ့ တွေ့နေပြီ။
စသုံးလုံး ဆိုတာ အစ သုံးလုံးပါ.. နဂိုကတည်းက ၃လုံးပဲ ရှိတော့ ကဒါခိုင် ဆိုတာ သိသွားတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
အားလုံးဘယ်လိုပဲတင်တင်ပါ.. ကျွန်တော်ကတော့ တစ်နေ့ တစ်ခုတောင်မနည်း ခေါင်းစားရတယ်.. အဟိ တစ်နေ့သုံးခုတောင်ဆိုတော့ တော်ပါပေတယ် . မြှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး .. တင်ပြောတာပါ (ဟဲနောက်တာ)